Kufambiswa kweMashoko Kosimudzirwa neVatungamiri veAfrica
Nezuro madeko, vatungamiri ava vakabvumirana kushandisa hwaro hwegwaro rakaparurwa kumusangano uyu, iro rinofanirwa kutevedzwa nenyika dzose dzemu Africa, mukufambiswa kwemashoko nenzira dzakasiyana siyana.
Musangano wevatungamiriri vemu Africa waenderera mberi neMuvhuro mu Addis Ababa. Vakuru ava vari kutarisa nezvehurongwa hwenyika imwe neimwe pamwe kutarisa hurongwa hwadzo munyaya dzekufambiswa zvakanaka kwemashoko nrnzira dzakasiyana siyana.
Mangwana vatungamiri ava vari kutarisirwa kutaura pamusoro pematambudziko ari munyika dzakaita seSudan.
NeSvondo manheru, vatungamiri ava vakabvumirana kushandisa hwaro hwegwaro rakaparurwa kumusangano uyu, iro rinofanirwa kutevedzwa nenyika dzose dzemu Africa, mukufambiswa kwemashoko nenzira dzakasiyana siyana.
Vatungamiriri ava vanonzi vakabvumiranawo kuti Africa inokwanisa kusimukira chete, kana ikasimudzira kufambiswa kwemashoko, kuitira kuti munhu wose ange aine mukana wekuwana mashoko aya nenzira dzakasiyana siyana.
VaNelson Chamisa ndivo gurukota rinowona nezvehumhizha mukufambiswa kwemashoko. VaChamisa vanoti hurumende yeZimbabwe mumwedzi miviri iri kutevera ichange ichiparura hurongwa hunoratidza kufambira kwairi kuita mberi kuti ibate dzimwe dzakaita seSouth Africa munyaya dzemashoko.